Tsy mety ny saiko raha mandalo eto amin’ny distrikan’i Faratsiho nefa tsy mandalo eto amin’ny kaomina Miandrarivo amin’izao fampielezan-kevitra izao. Fantatro tsy manana herinaratra ianareo vahoakan’i Miandrarivo, tonga ny fotoana androany ahazonareo izany. Manana tetik’asa aho ny hamorona orinasa manamboatra ireny fitaovana fampiasana amin’ny herin’ny masoandro ireny. Tsy maintsy hisitraka herinaratra ny isan-tokantrano eto amin’ny kaomina Miandrarivo. Ho asiko lycée, CEG ary EPP manarapenitra ihany koa eto. Manana fotoana isika amin’ny 19 desambra izao. Koa mino aho hanampy ahy ianareo.
Tsy nanadino anareo vahoakan’i Faratsiho aho na dia efa nandalo teto aza aho ny volana aogositra lasa teo. Fantatro fa betsaka ny olana sedrainareo vahoakan’i Faratsiho. Androany, tonga aho hanovan’ny tantaran’i Madagasikara ary hanova ny tantaran’i Faratsiho. Ho jereko manokana ny sehatrin’ny fahasalamana eto : ataoko manarapenitra ny hopitaly, asiko ambulance. Tsy adinoko ihany koa ny tontolon’ny fampianarana sy ny famongorana ny tsy fandriampahalemana. Ampio aho mba ahafahako manatanteraka izany.
Ireo antony mazava sy makadiry hifidianan-tsika tsy ankiambahamba ny Kandida Andry Rajoelina.
Anisan'izany ny velirano toa ny fanaovana laharam-pahamehana ny fandriampahalemana .
Ny fiarovana ny sisin-tanintsika sy ny harena voajanahary
Ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana miseho isan’andro
Ny fanamafisana ny fiarovana ny velaran’ny Tanindrazantsika
Ny fampiroboroboana ny politikan’ny fananan-tany tsy mitongilana.
Ny fanomezana jiro izay faran’ny mora indrindra
Ny fampidirana herinatra manerana an’i Madagasikara
Ny fanomezana rano madio azo sotroina ho an’ny rehetra
Andry Rajoelina dia mametraka ny atao hoe ady amin'ny kolikoly sy fitsarana tsy mitanila .
Ny tsy fisian’ny indra-fo ho an’ny kolikoly
Ny fanakaikezan’ny asam-panjakana amin’ny olom-pirenena
Ny fanaovana ho modely ireo olom-boafidy sy ny mpiasam-bahoaka
Ny fanavaozana sy ny fanamasina ny fitantana ireo fonja.
Ny fanomezana antoka fa hisy ny rafim-pampianarana ho an’ny rehetra
Ny Fanasongadinana ny fahaiza-manao avo lenta
Ny fanomezan-danja bebe kokoa ny fampianarana ara-teknika sy arak’asa, indrindra fa any amin’ny faritany
Ny fametrahana ara-pomba ofisialy ny fampianarana sivika sy ny maha olompirenena
Ny fahafahan’ny rehetra mahazo fitsaboana
Ny fantsarana ny fahasalaman’ny Reny sy ny Zaza
Ny fanamafisana ny fisoroana ireo aretina mifindra sy ny aretina ankapobeny
Ny fanavaozana ny fizarana ny fisotroan-dronono.
Amin'ny resaka angovo, i Andry Rajoelina dia manana ny tetik-asany amin'ny fampivoarana ny famokarana sy fampiasana ny "éthanol" , izany no marika fa handroso amin'ny teknolojia ekolojika goavana isika.
Azo ampiasaina ho toy ny solika ny ethanol. Ity tetikasa Andry Rajoelina vaovao ity dia hamorona asa vaovao marobe .
Ny mponina eto Madagasikara dia handray soa avy amin'ity solika vaoavao ity, satria ny vidin'ny solika dia ho mora tokoa ary maha tsara kokoa ny tontolo iainana.
Mijoro aho noho ny fitiavako ny tanindrazana sy ny vahoaka Malagasy. Hanampy anareo eto Ambohitrarivo amin'ny famokaram-bary aho ka hatsaraintsika haingana ny tohodrano ao Sahamaloto. Hataontsika raitra ihany koa ny hopitaly eto. Velirano no ataoko fa tsy maintsy mandresy isika ary tsy maintsy tafita i Madagasikara .
Mitsidika manokana anareo eto Tongarivo aho. Toerana isan'ny maro tanora indrindra eto. Filoha tanora, mitsinjo ny tanora ary mitsinjo ny rehetra no mendrika anareo. Fidio ny laharana 13 amin'ny 19 desambra. Anjaran'ny tanora amin'izay ny manavotra an'i Madagasikara.